တစ်နာရီစက်ဘီးစီးခြင်းမှတ်တမ်းကဘာလဲ။ - အကောင်းဆုံးအဖြေများ
အဓိက > အကောင်းဆုံးအဖြေများ > Bradley နာရီစံချိန်စက်ဘီးကို wiggins - ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရန်
Bradley နာရီစံချိန်စက်ဘီးကို wiggins - ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရန်
မိုင် ၁၀၀ ကီလိုမီတာ ၁၆၀ ကီလိုမီတာသည်စက်ဘီးစီးသူများစွာအတွက်အကာအကွယ်ဖြစ်သည်။ ထိုအကွာအဝေးအတွက်သုံးနာရီအောက်စက်ဘီးစီးနိုင်သည်။ သို့သော်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိရှိနိုင်မည့်နေ့ရက်၊ ယနေ့သူသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ဤစက်ဘီးသမိုင်းကိုမျက်မြင်တွေ့နိုင်သည်၊ Jonathanschubertis သည်သွား သူဟာအစားအစာနဲ့ရေကိုသယ်ဆောင်ရမယ့်မိုင်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်မှာသုံးနာရီကြာစံချိန်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ကြိုးစားပါ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်ကမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မီလ်တန်ကိန်းစ်နောက်ကနေလိုက်ပြီးသူစက်ဘီးကိုနော်ဝစ်ခ်ျကိုစီးနေတယ်။ , အဲဒီလို့ဘာဖြစ်လို့? ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမုန်တိုင်းကြီးရဲ့ကျောကုန်းကနေလာတာဖြစ်ပြီးအရှေ့မြောက်လေကိုတိုက်ခတ်နေတဲ့လေဟာဒီနေ့ငါတို့နဲ့အတူရှိနေလို့ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ကောင်းကင်မှာအပြာရောင်မိုးကောင်းကင်ရှိတယ်။ သုံးနာရီအကြာမှာယောနသန်သွားနေတာကိုကြည့်လိုက်ရင်သာမန် Mana ဆရာ၊ သိပ္ပံပညာရှင်၊ အချိန်ကုန်တဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကြောင့်ငါ့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေတဲ့စက်ဘီးသမိုင်းမှာအကြီးအကျယ်အခန်းကြီးတွေတွေ့ခဲ့ရတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ငါစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်၊ t Jonathan သည်သိပ္ပံပညာရှင်၊ နည်းပြဆရာနှင့်အားကစားသမားသည်မိုင် ၁၀၀ ကြာအချိန်ကာလစမ်းသပ်မှုမှတ်တမ်းကိုအထောက်အကူမပြုဘဲချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှစ၍ သုံးနာရီ၊ ရှစ်မိနစ်နှင့် ၁၅ စက္ကန့်အတွင်းမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကက။ စိန်ခေါ်မှုကတော့ ၃ နာရီမပြည့်မီမိုင် ၁၀၀ အကွာအဝေးသို့ပထမဆုံးသွားသူဖြစ်သည်။ အမှန်မှာထူးဆန်းသောအရာကိုမဆွဲဘဲအခြားလူများနှင့်ပြိုင်ပြေးခြင်းသို့မဟုတ်သင်တစ်စုံတစ် ဦး ကစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်စီးသောအချိန်ကိုသာမောင်းနှင်သည်။ ငါသိပြီ၊ ငါလေတိုက်မတိုက်ခင်ကျွန်တော်ဘယ်တုန်းကမှမမြင်ခဲ့ဖူးဘူး၊ မင်းဒီဘက်မှာမင်းရှိနေလိမ့်မယ်ဆိုတာသေချာတယ်။ ဒီနေ့လုပ်ဖို့ကြံရွယ်ချက်ထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အရာအားလုံးဟာနောက်ဆုံးကာလနဲ့အတူတူပဲ ကျွန်တော်ဟာ ၃ နာရီ ၈ မိနစ်စာမှတ်တမ်းရှိခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရက်စွဲတွေအားလုံးနဲ့ကစားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိခဲ့ကြပြီးအနိုင်ရမယ့်အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ Miltonkeynes အနီး Norwich အထိဒီနေရာကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်။ လေတိုက်တဲ့အခါငါမြန်မြန်သွားမယ်၊ ငါတို့ ၂ နာရီအောက်မှာပြီးပြည့်စုံတဲ့ tailwind ရှိတယ်။
ဒီ tailwind soyeah ရဲ့တစ်နာရီ ၂၈ မိုင်နှုန်းနှုန်းကိုကြည့်ကြပါစို့။ သူရူးသွားပြီ။ မိုင်တစ်ရာအဝေးကို tailwind ဖြင့်သွားရန်အကြိမ်မည်မျှရရှိနိုင်သည်၊ ထိုမှန်သောအိပ်မက်မှန်သမျှပြန်သွားစရာမလိုပါ၊ RRA မှပြုလုပ်သောဤမှတ်တမ်းသည်အမှန်တကယ်မှတ်တမ်းဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်နောက်ဆက်တွဲကားများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင် timekeepers နှစ် ဦး ရှိပြီးတစ်ခုမှာသူနောက်တွင်အမြဲကပ်နေပြီးမိုင် ၂၀ ခန့်အကွာတွင်ရှိသည်။ သူတို့ကရှေ့ကိုခုန်ကြပြီးအပြီးသတ်ကားမောင်းကြလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအပြီးသတ်မလွဲနိုင်အောင်နောက်ကားတစ်စီးနောက်မှလိုက်သွားပြီးသူတို့ကကားကိုဖြတ်ကျော်ရန်ခွင့်မပြုပါဘူး။ သူအတိတ်ကိုရိုက်ကူးနေစဉ်အနည်းငယ်ကြည့်လျှင်၊ ကားနောက်ကွယ်မှကင်မရာမင်းတစ် ဦး ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ပြလိမ့်မည်။ သို့မှသာသင်သည်ကော်မရှင်နာများနှင့်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာမှန်သမျှနှင့်အချိန်ကိုက်ကိုတွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ , သုံးနာရီအောက်မှာနိမိတျဆိုး ကျွန်တော်တို့ ၃ မိုင်သာဝေးတယ်လို့ထင်ဖို့သွားကြတာပေါ့။ ဒါပေမယ့်သူကဒီလေရဲ့အားသာချက်ကိုယူတာပါ။ ဒါကြောင့်လေဟာပျမ်းမျှ ၄၅ မိုင်အကွာအရှေ့မြောက်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်၊ ​​မယုံနိုင်လောက်အောင်မြန်တယ်။ နှစ်မိုင်ခရီးသွားနိုင်ပြီးသဘာဝဘေးဒဏ်များကျရောက်နိုင်သည်၊ ၎င်း၏ကွင်းဆက်သည် ၆၂ သွားကျည်ကြိုးကွင်းကြီးပေါ်သို့ပြန်ကျသွားနိုင်သည်။ ဤသည်မှာယောနသန်နှင့်အသင်းအတွက်အလွန်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်ပျောက်ဆုံးသွားသောအကြီးမားဆုံးသောအချိန်သည်ပြန်ထရတော့မည်ဖြစ်သည်။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်အရှိန်မြှင့်ရန်အရန်သင့်သိမ်းဆည်းမှုကာလအတွင်းသူ့ကိုနောက်သို့မလိုက်နိုင်တော့ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ၎င်းသည်ယောနသန်သွားနေစဉ်ပုံပေါ်နေသည်။ သူ့ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်ကိုမြင်တွေ့ရပြီးဖြစ်သည်။ မိနစ် ၂၀ မောင်းနှင်ခဲ့ပြီးသူထိုင်နေပုံရသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်တစ်နာရီ ၃၅ မိုင်နှုန်းနှုန်းဟာတစ်နာရီလျှင် ၅၅ ကီလိုမီတာထက်မကအလွန်လက်တွေ့မကျပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရိုက်ကူးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ OS မြေပုံတစ်ခုရှိပြီးတစ်နာရီမိုင်နှုန်းဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်သည့်အမြန်နှုန်းကိုသာကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုခြေရာခံပေးတဲ့ဒီစက်ဝိုင်းလေးကငါ့ကိုကြောင်အနက်ရောင်ကြောင်မှာ unsyep uh မအိပ်ခင် ၂၉ မိနစ် ၃၉ စက္ကန့် ၄ မိနစ် ၂၁ စက္ကန့်ကိုမောင်းနှင်နေတဲ့ယာဉ်မောင်းကိုခြေရာခံပေးမထားဘူး။ အောက်ပါမော်တော်ယာဉ်များနောက်ကွယ်မှဆထိုင်နေခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏အမြန်နှုန်းပြကိရိယာသည်ကျွန်ုပ်သည်တစ်နာရီလျှင် ၃၇ မိုင်နှုန်းသွားနိုင်ပြီးတစ်ချိန်ချိန် ၄၀ မိုင်နှုန်းသို့ရောက်နိုင်သည်။ နာရီနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အနည်းငယ်တိမ်းစောင်းနေခြင်းမှာဒေါသထွက်မိခြင်းဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အောက်ပါအသွားအလာ p ပါစေဘက်ဖို့ဝေးအလုံအလောက်ရပ်တန့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး မြည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ့်အရာကနှစ်လမ်းသွားရထားကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါကားမောင်းသူကိုရှေ့တွင်ရောက်နေပြီ၊ အဲဒါကိုဆက်ပြီးဆွဲယူပြီးကားမောင်းသူနောက်ကိုပြန်သွားပြီး n နေရာကိုပြန်သွားပါ။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ဒီမှာမလုပ်ချင်တာကနောက်ကွယ်မှာအသွားအလာကိုထိန်းသိမ်းထားတာပဲ။ သင်ကအမြန်နှုန်းနဲ့ရပြီးဂျွန်လည်းသူကားမောင်းတဲ့အခါအသွားအလာကိုသွားတွေ့လိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုန်ကျော်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်၊ သူဟာတစ်နာရီလောက်မြန်လိမ့်မယ်။ အချိန်တန်ရင်သူနဲ့အတူစစ်ဆေးရမယ့်အချက် ၃၆.၁ မှာ ၆၁.၄၈ ဖြစ်တယ်။ ဒီလမ်းကြောင်းကိုသင်လိုက်နာတဲ့အခါဒီလမ်းကြောင်းကိုသင်တကယ်သတိထားမိ အသေးငယ်ဆုံးအသေးစိတ်အထိအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ အသေးငယ်ဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို asphalt မှန်မှန်ရရှိရန်နှင့်ရာသီဥတုသည်အကွာအဝေးအကွာအဝေးကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ မည်သည့်ယာဉ်မီးမည်မျှအကွာအဝေးအထိအသေးစိတ်စီစဉ်ထားသည်၊ မိနစ်စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာဖြုန်းတီးနေတဲ့အချိန်မှာထိုင်ပြီးပြန်စားမယ် ရာသီဥတုနှင့်အမြန်နှုန်းအားလုံးတွက်ချက်သည့်လမ်းကြောင်း၏အချိန်၊ စက်ဘီးကိုအနီးကပ်ကြည့်ကြပါစို့၊ ယောနသန်သည်စီးနင်းလိုက်ပါပြီ။ ထို့ကြောင့်ဂျွန်သည်သင်၏စက်ဘီးကိုကျွန်ုပ်တို့မှတစ်ဆင့်သာပြောဆိုသည်။ အမှန်တကယ်သည်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ပြီဖြစ်ရာလူတိုင်းကသင်လိုအပ်သည်ဟုထင်ကြသည်။ နောက်ဆုံးပေါ် studs, သင်နောက်ဆုံးပေါ်လုံးကိုသိပေမယ့်၎င်းကို Formons 1 မှ Simonsmart ဟုခေါ်သောကောင်လေးတစ်ယောက်ကဒီဇိုင်းဆွဲပြီးသူနှင့်ထွက်လာချိန်တွင်ပြောခဲ့သည်။
သင်သိသည်အတိုင်းအခြားအရာအားလုံးထက်ရှေ့တွင်ရှိနေပြီးသူသည်သူ၌ရှိခဲ့သမျှသောအကောင်းဆုံးဘောင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုနေဆဲဖြစ်သည်။ theuci ကခဏတာတားမြစ်ထားသည့် anose cone တစ်ခုရှိသည်။ သင်ယခုကျွန်ုပ်သည်နောက်တစ်ကြိမ်အကြွေးတင်နေကြောင်းကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤဘောင်တစ်ခုလုံးကို အသုံးပြု၍ ပြ,နာမရှိခဲ့ပါ။ ၎င်းသည်အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ဒီစက်ဘီး aero စမ်းသပ်မှုဖန်ဆင်းအချိန်။ ငါတို့မှာသွား ၆၂ ပါး၊ ကြီးကြီးမားမားဂျော်ဂျီယာဘီးများ၊ ကြီးမားသောကွင်းဆက်ကိုင်ဆောင်သူများနှင့်စက်သီးလက်ကိုင်တပ်ဆင်ထားသည့်ရှေ့တွင်ကြီးမားသောကွင်းကြိုးတပ်ဆင်ထားသည်။ ကွင်းဆက်သည်နောက်ကျောကက်ဆက်တွင်ပိုမိုဗဟိုပြုသည်။ ထို့ကြောင့်သင်မရှုံးနိူင်ပါ။ မကောင်းတဲ့ကွင်းဆက်နဲ့သင်ဟာဘီးတွေပတ်ပတ်လည်မှာတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကွေးနေတာမျိုးမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် pedals တွေဟာပိုပြီးထိရောက်ပါတယ်။ uhspeed သည်မြှားသုညများကစားသည်။ သူတို့သည် flush နှင့်ဖိနပ်၏အောက်ခြေနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုဖြစ်စေသည်အဘယ်အရာကိုလူတွေကိုကျော်လေကြောင်းစီးဆင်းမှုချောမွေ့အတွက်တကယ်ကိုအရေးကြီးတယ်သည်ဤ uh စီမံကိန်းများကိုယ့်ဒီမှတ်တမ်းကြိုးပမ်းမှုအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီဇိုင်းနှင့်သူတို့သည်သူတို့တရားဝင် uci မဟုတ်ပေမယ့်ဗြိတိန်၌သင်တို့၏စက်ဘီးအချိန်ရုံးတင်စစ်ဆေးတရားဝင်ငါ၏အလက်ဖျံ၏ပရိုဖိုင်းကိုဖက်။ Iron Man triathlon ဖြစ်ရပ်များအတွက်လည်းတရား ၀ င်ပြီးသင်ဟာငါ့ကိုတော်တော်သိသာထင်ရှားစေတဲ့ bug စမ်းသပ်မှုအချို့ကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါရှေ့၌ clincher အပေါ် tubeless နည်းပညာနှင့်အတူစီး, ကဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည့် tubular ထက်အနားကွပ်နှင့်တာယာအကြားပိုကောင်းတဲ့ interface ကိုရှိပါတယ်။
ကျောဘက်မှာအပြာရောင်ဆီးအိမ်တစ်လုံး ၀ တ်ထားတယ်။ ရှေ့ဖက်မှာပုံသဏ္alsoာန်ကလေထုစီးဆင်းမှုကိုထိထိရောက်ရောက်ပျံ့နှံ့စေပြီးနောက်ကျောမှာရှိတဲ့ဆွဲအားကိုလျှော့ချပေးတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီအရာတွေအားလုံးဟာပေါင်းလိုက်တဲ့သေးငယ်တဲ့အရာတွေပဲလို့ငါထင်တယ်။ ဒီနေရာမှာမင်းရဲ့ crank လက်ကိုတိပ်ခွေနဲ့ရှင်းပြပါ။ ဟုတ်တယ်၊ ရွေ့လျားနေတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဟာလေထဲစီးဝင်လာတဲ့လေစီးဆင်းမှုကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အရာတွေလို့ပြောနေသလိုမျိုးပဲ။ စက်ဘီးတစ်ခွင်လုံး၏ထိပ်ဆုံးဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ကွင်းဆက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြွန်တိပ်အကြောင်းပြောဆိုခြင်းယခုငါအနည်းငယ်သုတေသနပြုခဲ့သည်။ သင်၏ပထမဆုံး disc ဘီးသည်တကယ့် disc အမှန်မဟုတ်ခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်ကျောင်းသားဘဝကတည်းက lso ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဆရာသင်တန်းတက်ပြီးဝေလနယ်မှာနေတယ်။ ငါမှာပိုက်ဆံအများကြီးမရှိဘူး၊ ငါ့မှာအကြံဥာဏ်ကောင်းရှိခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ disk ကိုဘီးနဲ့စက္ကူတွေပတ်ပြီးဒီဘီးကိုတည်ဆောက်တာနဲ့ငါပြေးရတယ်။ ပြီးတော့လူတွေရယ်၊ ဆိုလိုတာကတော့ငါကသူတို့ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကျော်တက်ပြီးတစ်ပတ် (သို့) l ပါ အခြားသူများကသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်လုပ် disc ဘီးများပြုလုပ်ရန်ကိုယ်တိုင်ကြိုးကပ်တိပ်ဖြင့်ကြိုးစားနေကြသည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ သို့သော်ယခုငါအနည်းငယ်ရောက်ရှိနေပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်တကယ့် disc disc ဘီးကိုရပြီ။ ဆိုလိုတာကဂျောနသန်သည်စားနိုင်ခြင်း၊ လေခွင်းအနေအထားကိုဤမျှကာလပတ်လုံးကြာရှည်စွာခံနိုင်ရည်ရှိသည်ဟုထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ သူသည်ခံနိုင်ရည်ရှိရှိ၊ ၂၄ နာရီချန်ပီယံနှင့်အချိန်များစွာစမ်းသပ်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူကလေခွင်းအနေအထားတွင်ထိုင်နေခြင်းကြောင့်သူနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိခဲ့သည်။ နောက်တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်သူကသူ့အသားအရေကိုသူ့အသားအရေရှေ့မှာထားတယ်။ သငျသညျများသောအားဖြင့်ကျောပိုးအိတ်၏နောက်ကျောသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုပေါ်တွင်ကုလားအုတ်များတွေ့မြင်ပေမယ့်သူကဓါတ်ကိုပြန်လည်နေနိုင်အောင်သူကသူ့အသားအရေဝတ်စုံများ၏ရှေ့မှောက်၌သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ရှိပါတယ်။
နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းမရှိဘဲဓါတ်ကိုပြန်လည်ထိန်းထားရန်လွယ်ကူသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်၎င်း၏ ဦး ခေါင်းနှင့်စက်ဘီးအကြားအလယ်၌ရှိသည့်ကွာဟမှုကိုသင်အမှန်တကယ်ပိတ်ဆို့ကြောင်းသင်မြင်နိုင်ရန်အတွက်၎င်းကိုလေဒီယိုဒိုင်းနမစ်ပိုများစေရန်ပြုလုပ်ရန်လည်းထိုတွင်ရှိနေသည်။ ပို၍ ပင်တက်ကြွသော၊ သင်လေကြောင်းစီးဆင်းမှုကိုပိုမိုချောမွေ့ချောမွေ့စေပြီးလေခွင်းဆွဲအားလျှော့ချပေးသည်၊ ၎င်းမှာအခြေခံအားဖြင့်အချိန်စမ်းသပ်မှုနှင့်ဆန့်ကျင်သောကြောင့်အရာခပ်သိမ်းကိုယခုအချိန်တွင်အမှန်တကယ်စဉ်းစားနေသည်။ ငါနောက်ထပ်ကြည့်ကြည့်နိုင်မလားကြည့်ရအောင်၊ ငါရှေ့ကိုပစ်မယ်၊ ယောနသန်ကအချိန်ဇယားဆွဲနေတယ်၊ ​​၄၅ မိနစ်လောက်ကျန်တော့တယ်၊ ၂၅ ကနေ ၂၇ မိုင်အထိဂိုးကသူရိုက်ချိုးလိုက်မယ်ထင်တယ်။ ငါသွားတွေ့တဲ့လမ်းကိုသွားပါ။ tso 17 မိုင် Norwichhe သို့ဖြည်းဖြည်းနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနေ သူကဒီစွမ်းအားကိုထိန်းထားနိုင်ပြီ၊ သူကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ၃၂ မိနစ်သာကျန်တော့မယ်။
ယောနသန်သည် ၂၅၀ ၂၅၈ အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟူသောစကားလုံးကိုရလိုက်သည်။ အလွန်တင်းကျပ်လာသည်။ ၁၁ မိုင်ခန့်သွားရတော့မည်။ တကယ်ထိတွေ့သွားသည်။ သူ့ကိုနောက်ဆုံးတွန်းလှန်ခြင်းနှင့်တွေ့ရန်ကြိုးစားသည်။ နောက်ဆုံးသူ့ကိုကြည့်ဖို့ကြိုးစားမည်။ ကျွန်တော်ဂိုးမသွင်းခင်မှာအလယ်တန်းဘုရင်တွေဆီကနေနော်ဝစ်ခ်ျကိုသွားပြီးယောနသန်ကိုလိုက်ရှာခဲ့တယ်။ နောက် ၃ မိနစ်၊ လေးမိနစ်မှာသူဟာဒီထောင့်ကန်ဘောကိုရောက်လိမ့်မယ်။ ဟုတ်တယ်၊ ရယ်စရာကောင်းတယ်၊ အခု ၄ မိနစ်လောက်မှာသူဟာနာရီ ၄၇ မိနစ်စောင့်ရတယ်။ ၃ နာရီကန့်သတ်ချက်က ၂ နာရီ ၅၇ မိနစ် ၅၈ စက္ကန့်နဲ့မြန်မြန်ကြည့်ရအောင်။ ဤမယုံနိုင်လောက်အောင်စွမ်းဆောင်ရည်၏ကိန်းဂဏန်းများအရဂျွန်သည်တစ်နာရီလျှင် ၃၃ မိုင်နှုန်းဖြင့်တစ်နာရီ ၅၄.၃ ကီလိုမီတာနှုန်းဖြင့်အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းမှာတစ်နာရီ ၄၇.၉ မိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ သူသည်တစ်နာရီ ၇၇ ကီလိုမီတာနှုန်းဖြင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၂၇၉ ဝပ်အားဖြင့် ၂၉၅ ကြိမ်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ watts, မယုံနိုင်စရာစကားလုံးတစ်လုံးပါ နင့်ကိုငါအရမ်းချစ်တယ်၊ နင့်ကိုငါအရမ်းချစ်တယ်၊ နင့်ကိုငါအရမ်းချစ်တယ်၊ နင့်ကိုငါအရမ်းချစ်တယ်၊ လေးမိနစ်အောက်မှာပြေးနေတဲ့ bannister ဟာသူဟာအားကစားသမားတစ်ယောက်လိုတောင်ဟန်ဆောင်မထားပါဘူး။ သူဟာသူလို့မထင်ပါဘူး၊ သူဟာသူ့အကြောင်းကိုမထင်ပါဘူး၊ သူဟာမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာဝန်ခံမှာပါ ကမ္ဘာကြီးပေါ်ပေါက်လာချိန်တွင်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်းသူသည်အခြားမည်သူ့ကိုမျှမလုပ်မီသူရောက်ရှိရန်ရဲစွမ်းသတ္တိရှိခဲ့သည်။ ထိုစက်ဘီးပေါ်မှတက်ကြွနေသောလူငယ်ကြည့်ရှုသူများအားသင်မိုင် ၁၀၀ သာသွားနိုင်သည်ဟုသင်သိသည်။ , ထိုသူတို့ကိုသင်ပေးလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအရိပ်အမြွက်နှင့်အကြံပေးချက်များငါစက်ဘီးကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖော်ပြရန်အံ့သြဖွယ်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်ထင်? ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်အခြားမှတ်တမ်းများနှင့်အရာများစွာရှိသည်။ ငါလူတစ်ယောက်အဖြစ်ကြီးပြင်းလာတာကြောင့်သင်ဟာမင်းရဲ့အဓိကဆိုင်ကယ်စက်ဘီးစီးရတာပျော်စရာကောင်းပြီးစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတာမင်းသိတယ် ဆိုလိုတာကတော့မိုင်တစ်ရာကိုတစ်နာရီမိုင် ၃၄ နှုန်းနဲ့သွားနိုင်ရင်အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသင်သိတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါဤမှတ်ချက်အပိုင်းတွင်မြန်ဆန်ခြင်းနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၏ဤရူးသွပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်မြင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
Theစံချိန်ဖုံးလွှမ်းအရှည်ဆုံးအကွာအဝေးသည်တစ်နာရီ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ Aprilပြီလ ၁၆ ရက်တွင် (မက္ကဆီကို) Agusascalientes ရှိအမှတ် ၅၅.၀၈၉ ကီလိုမီတာကိုသတ်မှတ်ထားသောဘယ်လ်ဂျီယံမှ Victor Campenaerts ကလက်ရှိအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် Denise Mueller-Korenek သည်ထိုအရာကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည်စက်ဘီးကုန်းမြေအမြန်နှုန်းစံချိန်တစ်နာရီမိုင် ၁၆၇ မိုင်နှုန်းဖြင့် Utah's Bonneville Salt Flats တွင်တစ်နာရီမိုင် ၁၈၃.၉၃၂ မိုင်ထိထိတိုက်ခတ်နိုင်သည်။
ငါတို့အားလုံးကငါတို့စက်ဘီးကိုပိုမြန်ချင်တာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါတို့တွေအားလုံးဟာခက်ခဲစွာမစီးချင်ကြဘူး၊ အိုးမဟုတ်ဘူး၊ ဒါဆိုစက်ဘီးစီးတာကိုပိုမြန်မသွားဘဲမြန်မြန်ရနိုင်မလား။ သင်တတ်နိုင်သည်! ဒါကငါတို့ဒီဆောင်းပါးမှာပြောမယ်၊ ဒါပေမယ့်အေရိုးဗစ်ပိုများတာဒါမှမဟုတ်ဖြည့်စွက်ဖို့စဉ်းစားတာစတဲ့သိသာထင်ရှားတဲ့အရာတွေကိုငါတို့မဟောတော့ဘူး။ ငါအနည်းငယ်စမတ်လာပြီ။ - အိုး၊ မှန်တယ်။
လေဖိအား၊ လေဖိအား၊ အရှိန်၊ မောင်းနှင်မှုပွတ်တိုက်မှု၊ ကွင်းဆက်လိုင်းနှင့်သင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့်နေ့၏အချိန်ကိုပါထည့်တွက်ပါမည်။ သင်သည်သင်၏မြင်းကိုစီးနင်းနေသောမြန်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းတွေ။ ဒါပေမယ့် ဦး ဆုံးအနေနဲ့တာယာဖိအားအကြောင်းဆွေးနွေးကြပါမယ်။ - ဒါကရွားလှဖြစ်ခဲ့သည်။ (ပျော်ရွှင်သောဂီတပေါ့ပ်ဂီတ) - အကယ်၍ သင်အမှန်တကယ်ဖိအားကိုခံစားနေရပါက၎င်းသည်သင်၏ ဦး ခေါင်းမဟုတ်ပါ။
သင်သည်သင်၏ထရပ်ကားစုပ်စက်နှင့်အတူအနည်းငယ်အလွန်အမင်းအလွန်အမင်းခဲ့ကြပေမည်။ ယခုသင်သည်ခဲယဉ်းသောတာယာများဖြင့် velodrome ၏ပျော့ပျောင်းသောပျဉ်ပြားများပေါ်တွင်ရောက်နေနိုင်သော်လည်းလမ်းမည်မျှချောကြောင်းသင်မည်မျှသိသနည်း။ အများကြီးမဟုတ်, အထူးသဖြင့်ဒီမှာဗြိတိန်၌။ ပိုမိုမြင့်မားသောဖိအားသည်ပိုမိုမြန်ဆန်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်သင့်ကိုပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရုံသာမကမြန်နှုန်းကိုလည်းပါပေးသည်။
လတ်တလောလေ့လာမှုများအရလှိမ့်တွန်းလှန်ခုခံနိုင်မှုသည်အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုရှိသည်။ ပထမ ဦး စွာ hysteresis ဆုံးရှုံးမှု၊ သင်၏တာယာများအားပုံပျက်။ ဆုတ်ယုတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောအပူမှတစ်ဆင့်စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်ရပ်ဆိုင်းမှုဆုံးရှုံးမှုများ။ ဤဆိုင်းထိန်းစနစ်ဆုံးရှုံးမှုသည်မစုံလင်သောလမ်းမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်ပေါ်ပေါက်သည်။ Paris-Roubaix သည်အဓိကဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်ယခုသင်၏တာယာဖိအားကိုလျှော့ချပါကသင်၏တာယာများသည်၎င်းတို့ကိုယ်ကိုပုံပျက်သွားစေနိုင်သည်။ Paris-Roubaix ရှိအားသာချက်များသည် 30c တာယာများကို4bar သို့မဟုတ် 60 psi သာဖြင့်လည်ပတ်မည်ဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောလေ့လာမှုများအရပုံမှန်တာယာဖိအားများရှိပုံမှန်လမ်းများပေါ်တွင်ဆိုင်းထိန်းစနစ်ဆုံးရှုံးမှုသည်အလွန်မြင့်မားကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်သည် ၁၀၀ မှ ၁၂၀ psi ဖြစ်သဖြင့်သင်၏ဖိအားကိုလျှော့ချလျှင်၊ ပုံမှန်လမ်းများပေါ်တွင်လည်းအလားတူလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ တာယာများသည်လမ်းပေါ်ရှိခုန်ခြင်းများနှင့်အစွန်းအထင်းများကိုစုပ်ယူမည့်အစားပိုမိုမြန်ဆန်။ ပိုမိုအဆင်ပြေလွယ်ကူသည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အကောင်းဆုံးတာယာဖိအားသည်အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုယခုကျွန်ုပ်တို့မပြောနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏အလေးချိန်၊ သင့်အမြင့်နှင့်သင်မောင်းနှင်နေသည့်လမ်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်လည်းမူတည်သည်။ ထောင့်တဲ့အခါဖိအားကပိုချုပ်ကိုင်ထားတယ်။ (ပျော်ရွှင်သောပေါ့ပ်ဂီတ) - ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားနောက်တစ်ဆင့်သို့ရောက်စေသည်။
အရှိန်အဟုန်သည်အလွန်သင်၏မိတ်ဆွေဖြစ်သည်။ သငျသညျကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်မြန်နှုန်းပိုမြန်, သင်မြန်အတူတူပင်အားထုတ်မှုပမာဏနှင့်အတူစီးပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဆုပ်ကိုင်မှုပိုများသောကြောင့်သင်သည်ထောင့်များမှတစ်ဆင့်အမြန်နှုန်းပိုမြန်သည်သို့မဟုတ်သင်ကုန်းတက်တက်ခြင်းကိုစတင်သောအခါကစားခြင်းတွင်လည်းပါ ၀ င်နိုင်သည်။ အားထုတ်မှု။
တောင်တက်လေတိုလေလေသက်ရောက်မှုများလေလေဖြစ်တယ်။ အပေးအယူတစ်ခုရှိတယ်။ သင်တက်ခြင်း၏အောက်ခြေသို့ရောက်သောအခါစွမ်းအင်များစွာဆုံးရှုံးလျှင်သင်တက်ရန်အသုံးပြုရန်ခွန်အားနည်းလိမ့်မည်။
ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ကြံစည်မှုလည်းရှိတယ် - မင်းမှန်ပါတယ်၊ Sy၊ အဲဒါကိုကြံစည်မှုရှိတယ်။ ငါမြင်းစီးသူရဲ ၃၀၊ ၄၀ လောက်ရှိတဲ့အုပ်စုထဲကိုရောက်သွားတယ်၊ စွမ်းအင်ချွေတာရန်ကျောဘက်ကို ဦး တည်ပျံသန်းနေတယ်ဆိုတာသိသာထင်ရှားပါတယ်။ အလေ့အထဟောင်းတွေကအရမ်းကိုသေဆုံးတယ်။ လျောက်ပတ်သောတောင်တက်မှစသောမတ်စောက်သောတောင်တက်သို့အုပ်စုနောက်ဘက်ရှိမြင်းစီးသူရဲများသည်နေရာမချန်ခဲ့ကြသောကြောင့်ထိပ်ဆုံးမြင်းစီးသူရဲများသည်တောင်တက်အပေါ်အနည်းငယ်တုန်လှုပ်ချောက်ချားစေသောကြောင့်အချို့နေရာများသို့ရောက်ရှိသွားသည်။ ဘေးထွက်ရယူဖို့။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏အားလပ်ချိန်များကိုအသုံးပြုရန်မလိုပါ။ အုပ်စု၏နောက်ကျောမှသင့်ကိုထိထိရောက်ရောက်သယ်ဆောင်နိုင်သည့်အရှိန်အဟုန်နှင့်မြန်နှုန်းများအားလုံးကိုသင်အသုံးမပြုတော့ပါ။
မဖွင့်, သိသာတဲ့ရှေ့။ မင်းလေကိုမလိုချင်ဘူး - မဟုတ်ပါ၊
အခုတော့သူကလိမ်တာနဲ့တူတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါဟာလုံးဝမမျှတဘူး။ ၎င်းသည်သင်၏လွှဲကိုကောင်းစွာအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ (ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပေါ့ပ်ဂီတ) အားကစားပွဲတစ်ခုတည်း၌ပင်ငါတွေ့ခဲ့သောနောက်ထပ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုမှာလေယာဉ်သည်လေဘယ်အရပ်မှလာသည်ကိုမသိသောယာဉ်မောင်းနှစ် ဦး ရှိသည်။
စက်ဘီးစီးသူအသစ်တစ်ယောက်အနေဖြင့်၊ သင့်ရှေ့မှောက်၌စီးနင်းသူနောက်ကွယ်တွင်စီးနင်းခြင်းသည်ကြီးမားသောအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်ချက်ချင်းသိရှိလာပါလိမ့်မည်။ သို့သော်လူအနည်းငယ်သာဤစွမ်းအင်ချွေတာသောချိုမြိန်သောအစက်သည်ဘေးတိုက်မှလေလာသည်နှင့်အမျှအနေအထားပြောင်းလဲသွားသည်ဟုလူအများသိကြပုံရသည် - လေသည်လက်ဝဲမှလာလျှင်လူ၏ညာဘက်ကိုတိုက်ရိုက်ထိုင်ရမည်။ ရှေ့နှင့်အပြန်အလှန်။ လေကညာဘက်ကိုလာရင်လေရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုထိုင်ရမယ်။
သင်၏တည်နေရာအတိအကျသည်လေထောင့်၊ သင်၏အရှိန်နှင့်လေအရှိန်ကဲ့သို့သောအရာများအပေါ်တွင်မူတည်လိမ့်မည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်အားကောင်းတဲ့လှိုင်းတံပိုးတွေကြားမှာမင်းကလူတစ်ယောက်ကိုအတော်အတန်ထပ်ခါထပ်ခါထပ်နေရမယ်ဆိုတာကိုသင်တွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်လိမ့်မယ်။ ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့သိတဲ့အတိုင်းဒီဟာကိန်းအတွက်ပုံသေနည်းမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်စမ်းသပ်မှုနဲ့အမှားတွေကြောင့်မင်းဟာ sweetspot ကိုရှာတွေ့နိုင်တယ်။ လေတိုက်နှုန်း၌တည်၏။ ပြီးတော့လုပ်သင့်တာကစွမ်းအင်တစ်တန်သက်သာစေလို့ပဲ။
အထူး roubaix 2018 ပြန်လည်သုံးသပ်
သငျသညျပိုမြန်သွားရရှိသောပါဝါ။ - Lasers on ။ (ပျော်ရွှင်သောပေါ့ပ်ဂီတ) - တိုနီမာတင်နှင့် Tom Dumoulin တို့ကဲ့သို့သောသူတို့သည် TT စက်ဘီးတွင်သွားကြိုးကွင်း ၅၈ လုံးကိုအဘယ်ကြောင့်တပ်ထားရကြောင်းသင်သိပါသလား။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလူတွေထက်အများကြီးပိုစွမ်းအားထုတ်ပေးတာကြောင့်ပဲ။
မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ဇာတ်လမ်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုကဒီကြီးမားတဲ့ပြားချပ်ပြားတစ်ချောင်းနဲ့သင်နောက်ကက်ဆက်အနည်းငယ်ပိုကြီးတဲ့ဂီယာတွေနဲ့အချိန်ပိုသုံးနိုင်ပြီးသူတို့ရဲ့ကွင်းဆက်လိုင်းကအရမ်းဖြောင့်နေတယ်၊ ​​ဆိုလိုတာက drive ရထားမှာပွတ်တိုက်မှုနည်းတယ်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်မဟုတ်ဘူး, ဒါပေမယ့်သူကစွမ်းအင်ကိုကယ်တင်။
ဒီတော့ပိုပြီးအခမဲ့မြန်နှုန်း။ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လူသေတွေအတွက်ဆိုလိုတာက ၅၃ ပေါ်ကကွင်းဆက်တွေထက်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းတဲ့ရှေ့တန်းကိုမောင်းနှင်တာကအကောင်းဆုံးလို့ဆိုလိုတာဖြစ်နိုင်တယ်။
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရက်များ (ပျော်ရွှင်သောဂီတပေါ့ပ်ဂီတ) အလားတူကိစ္စမျိုးတွင်သန့်ရှင်းသောမောင်းနှင်မှုသည်ပိုမိုမြန်ဆန်သည်။ ယခုတွင်အမှိုက်နှင့်ဆန့်လွန်းနေသောကွင်းဆက်များမှမောင်းနှင်မှု၏ပွတ်တိုက်မှုဆုံးရှုံးမှုများသည်အထူးအရေးကြီးသည်။
သန့်ရှင်းသော၊ မသန့်ရှင်းသောချည်နှောင်ထားသောကွင်းဆက်သည်အလွန်ချောမွေ့သောကွင်းဆက်ထက် ပို၍ ထိရောက်သည်ကိုသင်သိပါသလား။ ငါလည်းမလုပ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဖြစ်ပုံရတယ်။ ပြီးတော့မောင်းနှင်မှုလျှော့ချတဲ့နေရာမှာအခြားတွေထက်အများကြီးပိုမြန်တဲ့ချောဆီအချို့ရှိပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကုမ္ပဏီတော်တော်များများက၎င်းတို့သည်အမြန်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကြပြီး၎င်းတို့၏အဆိုပြုချက်များကိုအထောက်အပံ့ပေးရန်ဒေတာများရှိသည်။
ဒါကြောင့်တစ်နည်းနည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာသိပ်ပြီးရှုပ်ထွေးမှုမရှိတဲ့၊ ဒါကြောင့်သင်ကမဖြစ်စလောက်အကျိုးအမြတ်ကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်သုတေသနအချို့လုပ်သင့်သည်။ (ပျော်ရွှင်သောဂီတပေါ့ပ်ဂီတ) သင်ဖိအားပေးခံရသည်ဟုခံစားရလျှင်၎င်းသည်သင်၏ ဦး ခေါင်းသာဖြစ်နိုင်သည်။
သို့သော်ရာသီဥတုအခြေအနေသည်သင့်ကိုသိသိသာသာနှေးကွေးစေနိုင်သည်။ ယခုလေနှင့်မိုးသည်လေဖိအားသည်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ကြောင်းထင်ရှားသောအရာများဖြစ်ပါသလား။ စွမ်းအင်များများထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းမြင့်မားသောအမြင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မြန်ဆန်စွာသွားနိုင်သည်ကိုများစွာသောသင်သိလိမ့်မည်။ သို့သော်ထင်ရှားသောအချက်မှာမတူညီသောလေဖိအားများနှင့်အပူချိန်များသည်မြန်နှုန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်၊ နေ့စဉ်လေထုဖိအားနှင့်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်သည်ကြီးမားသောခြားနားမှုကိုမဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း အကယ်၍ သင်ပြင်းထန်သောမိုးကြိုးမုန်တိုင်းတစ်ခုအပြီးမောင်းနှင်နေပါက၊ ဥပမာ၊ နွေရာသီနွေရာသီတွင်၎င်းသည်လေဖိအားကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။
ဘယ်လောက်ပါလဲ? ကောင်းပြီ, တူညီတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူမြန်နှုန်းသုံးရာခိုင်နှုန်းအထိအမြတ်။ (ပျော်ရွှင်သောဂီတပေါ့ပ်ဂီတ) ယခုရာသီဥတုသာမကသာမကအချိန်သည်လည်းမြန်နှုန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ဘရာဇီးနိုင်ငံရှိသုတေသီများကနံနက်ခင်းမဟုတ်ဘဲညနေခင်း၌ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုကိုပြုလုပ်သည့်အခါခုနစ်ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးတိုးတက်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
မှန်ပါသည်၊ ဤတိုးတက်မှုသည်တစ်မိုင်ကျော်မျှသာရှိသေးသော်လည်းဤသက်သေသာဓကသည်အခြားယခင်လေ့လာမှုများကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ညနေပိုင်းတွင်ကားမောင်းလျှင်မြန်မြန်သွားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ချစွာပြောနိုင်သည်။ 'အဘယ်ကြောင့်?' အကြောင်းပြချက်အတိအကျကိုသူတို့မသိဘူး၊ ငါလည်းမသိဘူးလို့မေးတယ်။
ဒါပေမယ့်နောက် Strava KOM ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်သွားမယ်ဆိုရင်မုန်တိုင်းတစ်ခုအပြီးနွေရာသီညနေမှာဖြစ်လိမ့်မယ်။ အခုတော့နံနက်စောစောလေလေလေဖိအားကတော်တော်မြင့်တယ်၊ ငါ့တာယာတွေအရမ်းနည်းလွန်းတယ်၊ ငါမောင်းနှင်တဲ့လမ်းကြောင်းကအရမ်းညစ်ပတ်တယ်၊ ရိုးသားဖို့ငါလွန်းတဲ့ချောဆီကိုသုံးတယ်ထင်တယ်။ ငါမြန်မြန်ဆန်ဆန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်သွားရမယ့်နည်းလမ်း” ဆောင်းပါးနှင့်အတူကော်ဖီတစ်ချပ်လိုချင်နိုင်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
အများစုလိုလားသူစက်ဘီးစီး200 မှထုတ်လုပ်300 ဝပ်ပျမ်းမျှအားဖြင့်လေးနာရီကြာခရီးစဉ်အဆင့်တွင်။ ဒါကဘာလဲကောင်းတယ်အကြောင်းwattage။ ၎င်းသည်ကိန်းရှင်အားလုံးမှထွက်ပေါ်လာသည်ဟု Pennino ကဆိုသည်။ သင်သည်သင်၏နှလုံးခုန်နှုန်းကိုလေ့ကျင့်နေပါကသူသည်သင်စိတ်ဖိစီးမှု၊ ငြီးငွေ့ခြင်း၊06.28.2015
သင်၏အမြင့်ဆုံးသောကြံ့ခိုင်မှုကိုရရှိရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းကားအဘယ်နည်း။ လေ့ကျင့်ခန်းမှာအိမ်ထဲမှာလား? - သို့မဟုတ်အပြင်မှာလား ကျနော်တို့အချက်အလက်တွေဆွေးနွေးရန်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ (Soft jazz ဂီတ) - ပထမတစ်ခုမှာအိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခြင်း၏အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများအနက်တစ်ခုမှာအရည်အသွေးဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ဆိုလိုတာက၊ သင်ကမိုးလုံလေလုံသင်တန်းဆရာတစ် ဦး ကိုသင်အသုံးပြုတဲ့စက္ကန့်တိုင်းကိုသင်ကနင်းပြီးရေတွက်နိုင်တယ်။
မီးပွိုင့်များကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်း၊ လမ်းဆုံလမ်းခွများတွင်ရပ်ခြင်း၊ နောက်ပြီး GCN ရုံးတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မိုးလုံလေလုံလေ့ကျင့်ရေးအောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းကိုဒီမှာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာပြိုင်ပွဲမှာနောက်ဆုံးပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက် Matt ဟာမိုးလုံလေလုံလေ့ကျင့်ခန်းကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချခဲ့တယ်။
သူသည်နာရီပေါင်းများစွာခရီးသွားခြင်း၏အရည်အသွေးအားလုံးကိုသူနှင့်အတူယူဆောင်သွားခဲ့ပြီးမိုးတွင်းကာလကြီးသည့်မိုးလုံလေလုံလေ့ကျင့်ရေးယူနစ်များထဲသို့ချုံ့လိုက်သည်။ အိုကေ, မျှတသောအချက်။ ကြောင်းနှင့်အတူအငြင်းပွားလို့မရပါဘူး
ကျွန်ုပ်သည် ၀ န်ခံရန်လိုသည်၊ အနားယူချိန်၌လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြေး။ ကျွန်ုပ်၏ပျမ်းမျှစွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းမှုကိုကြည့်ရှုရန်လိုသည့်အခါကျွန်ုပ်မုန်းပါသည်။ သို့သော်ရှည်လျားသောစီးနင်းမှုများအတွက်သူတို့သည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည်။ တကယ်ပျော်စရာ
ကြားကာလနှင့်အတူရှည်လျားသောခရီးစဉ် areအီးဖြစ်ကြသည်။ - ကောင်းပြီ သို့သော်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ မှတ်တိုင်များသို့ရောက်ရှိခြင်းသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းပြီးလှုံ့ဆော်မှုလည်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်သင်ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုယူလျှင် TrainerRoad သည်ဥပမာအားဖြင့်၊ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုသို့ ဦး တည်သောပစ်မှတ်ထားသည့်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုစီပါ ၀ င်သောဂရုတစိုက်စဉ်းစားထားသောလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များကိုပို့ပေးသည့်လေ့ကျင့်ရေးအက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သင်လေ့ကျင့်ရန်ရရှိနိုင်သည့်အချိန်ကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစား။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင်၏ Functional Threshold Power မှသတ်မှတ်ထားသည့်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်နှင့်တစ် ဦး ချင်းအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်ဖြစ်သည်။
ပုံမှန် FTP စစ်ဆေးမှုများနှင့်လည်းကြည့်နိုင်သည်။ မင်းဒီမှာတစ်ခုရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားဟာပန်းတိုင်တွေချဖို့၊ ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့၊ သမိုင်းမှတ်တိုင်တွေကိုစစ်ဆေးဖို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့လူစားမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်မိုးလုံလေလုံလေ့ကျင့်မှုဟာသင့်အတွက်သေချာပါတယ်။
ထို့အပြင်သင်ကြားခြင်းသင်ခန်းစာတိုင်းသည်သင်၏အသိပညာနှင့်ယုံကြည်မှုအရအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းသေချာစွာသင်သိလိမ့်မည်။ အဲ့တာသာမကဘဲအချိန်ကာလတိုင်းမှာကျွန်တော့်ပစ်မှတ်စွမ်းအားပါ ၀ င်လို့ပါ။ ကောင်းပြီ၊ ၀ န်ခံချင်တယ်၊ မင်းမှာ smart trainer ရှိဖို့မလွယ်ဘူးဆိုရင်ဒါကလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်မိုးလုံလေလုံသင်တန်းဆရာတစ် ဦး ရဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ခုခံမှုကသင့်ကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ ကွိုးစားအားထု၏အဆင့်ကို။
တကယ်လို့သင်ဟာ smart trainer တစ်ယောက်ရှိမယ်ဆိုရင် ERG mode အတွက် box ကိုနှိပ်လိုက်ရင် wattage အတိုင်းပဲထားမှာပါ။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါ၊ လမ်းကသင့်ကိုတိကျတဲ့ခုခံတန်ဘိုးတစ်ခုပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သျောလညျး, သငျသညျသတ်မှတ်ထားပါဝါမှာမောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်, သင်ရုံပေါ်မှာလုပ်ဖို့မှန်ကန်သောလမ်းများရှာဖွေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့သင်ကားမောင်းခြင်းစွမ်းရည်များတိုးတက်လာသည့်ထိုလမ်းများကိုမောင်းနှင်ခြင်းဖြင့်မြန်ဆန်သောအရာအားလုံးကိုမောင်းနှင်ရာတွင်အရေးကြီးသကဲ့သို့၎င်းသည်မိုးလုံလေလုံလေ့ကျင့်ပေးသူတစ် ဦး ကိုပတ်။ သွားစရာလမ်းမရှိပါ။ - ဟင့်အင်း၊ အိမ်တွင်းလေ့ကျင့်မှုသည်သင်၏စက်ဘီးစွမ်းရည်ကိုကျွန်ုပ်တို့နေရာချထားသည့်နေရာတွင်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
ဒါပေမယ့်ငါတို့မှာမရှိတာတစ်ခုကတော့အိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ခဏခဏပုံမှန်တက်နေတာပဲ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရှည်ဆုံးတောင်တက်နည်းကိုသင်တုပနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ရှည်လျားသောတောင်တက်နည်းများကိုစီးနိုင်သည့်အထိရောက်ဆုံးနည်းဟုဆိုစရာမရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အိမ်တွင်း၌လေ့ကျင့်ခြင်း၏အခြားအကျိုးကျေးဇူးများမှာသင်ပိုမိုတိကျစေရန်သင်၏လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း၏ရှုပ်ထွေးမှုကိုတိုးမြှင့်ရန်သင်အမှန်တကယ်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဒီတော့ဒါကို TrainerRoad ကနေနောက်တစ်ခါယူမယ်ဆိုရင် Wolf Jaw Plus Five လို့ခေါ်တယ်။ ငါဒီမှာကြည့်နေတဲ့အချက်က ၇ မိနစ်ခန့်ရှိပြီးလေးမိနစ်ခွဲလေးဆယ်စီစီ၊ စက္ကန့်၊ ၁၅ စက္ကန့်၊ ၁၂၅ မှာ။ % FTP ၏ ၈၈% ။ ဟမ်လားလမ်းပေါ်မှာစမ်းကြည့်စမ်း။ - ဒါကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အပြင်ဘက်မှာတော့မင်းကကုန်းမြင့်မြင့်ကိုဖြိုဖျက်နိုင်တယ်။ ထိုထက်မကသောအရာရှိသေးသလော။ တိကျတဲ့နှင့်အချို့သောနည်းလမ်းတွေထဲမှာကြောင်းလုပ်နေတာထက်ပို။ ပျော်စရာ? အိုး၊ မင်းနဲ့အုပ်စုကောင်းကောင်းရှိရင်မင်းတို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒီကြားခံအပိုင်းဟာ paceline ကိုစီးရတာထိရောက်မှုရှိတယ်။ ဤအရာသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းပြီး၎င်းသည်သင်ယူရန်အလွန်အရေးကြီးသောကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆုံးစွန်သောအောင်မြင်မှုအကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။
နှင့်အုပ်စုစီးနင်းကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်လိုလျှင်ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုလိုအပ်သည်။ ဒါကသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကတဆင့်မိုးလုံလေလုံလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပြီးသင်ဟာသင့်အလုပ်ကိုအမျိုးအစားအလိုက်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာသင်သိတယ်။
တသမတ်တည်း, အရည်အသွေးမြင့်အလုပ်။ တဖန်ငါတို့ TrainerRoadhere ဥပမာကိုကြည့်ပါ၊ သင်သည်သူတို့၏အစီအစဉ်များကိုသင်လိုက်နာပါကသင်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်း။ သင်ပြီးဆုံးချိန်တွင်တစ်ကြိမ်တွင်တစ်ကြိမ်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ တရားမျှတမှုရှိရင်သင်အပြင်မှာလုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အတွင်းပိုင်းမှာမိုးလေဝသနဲ့မသက်ဆိုင်ဘဲနေ့ခင်းဘက်မတွင်ဒီဇွဲရှိခြင်းကိုအာမခံနိုင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ဒါကငါ့ကိုမိုးလုံလေလုံလေ့ကျင့်ပေးမှုနောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ဆီသို့ပို့ဆောင်ပေးတယ်၊ မင်းမှာမင်းဘယ်ရာသီဥတုရှိမယ်ဆိုတာအတိအကျသိထားတယ်၊ ဒါကြောင့်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေအောက်မှာလေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုမစွန့်လွှတ်ပါနဲ့။ - ဒန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗြိတိန်တွင်နေထိုင်သည် - မှန်ပါသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမွန်သောနေ့တစ်နေ့သို့မဟုတ်နှစ်ရက်မှလာသည်။ သြဂုတ်လတွင်။ တစ်ခါတစ်ရံ။
တကယ်တော့ရာသီဥတုကသိပ်ပြီးမဆိုးဘူးဆိုရင်တောင်ပျော်စရာကောင်းတယ်။ ငါတို့ဟာစက်ဘီးသမားတွေပါ။ ကျနော်တို့အပြင်ဘက်မှာဖြစ်ချင်တယ်။
ပြီးတော့အတွင်းထဲကျွန်တော်ဆိုလိုတာကခင်ဗျားသိတယ် Si ။ ဘယ်မှာနေနေပဲချွေးထွက်နေတာ၊ - ဟုတ်ပါတယ်၊ တရားမျှတမှုမှာငါအနည်းငယ်ချွေးထွက်နေသည်။ ဒါပေမယ့်ပန်ကာတစ်ခုကအများကြီးကူညီပေးပါတယ်၊ အဲဒါကကျွန်တော့်စက်ဘီးကနေရေချိုးခန်းအထိမဝေးပါဘူး။ အိုကေစီ၊ အရည်အသွေးနှင့်ကြားကာလရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၊ မိုးလုံလေလုံလေ့ကျင့်ခန်းသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးချိန်ခွင်လျှာသာစက်ဘီးဖြင့်တောင်မှသင်ဟာမိနစ် ၉၀ ကျော်ကိုမိုးလုံလေလုံလေ့ကျင့်ပေးသူတစ် ဦး တည်းအတွက်အသုံးမပြုပါ။ ဒါပေမယ့်ဘယ်ဟာကပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတုန်းမှာရယ်စရာမလိုပါဘူး။ ၎င်းသည်ထိရောက်မှုရှိသော်လည်းလူတိုင်းနီးပါးအတွက်၊ အိမ်တွင်းလေ့ကျင့်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြင်သို့ပိုမိုမြန်ဆန်စေခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်
အိုး၊ နောက်ဆုံးတော့ငါနဲ့အတူရှိပြီ။ ငါလုံးဝညစ်ပတ်နေပြီ။ ပြီးတော့ခန်းမမှာစက်ဘီးသင်တန်းတက်ဖို့လည်းမလိုဘူး။
အိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်သင့်အားအော်ဟစ်ငိုယိုစေနိုင်သော်လည်း၊ အပြင်ဘက်မှာသင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်သင်ကမိုးလုံလေလုံလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သလိုမျိုးမသင့်တော်ဘူး ။- သင်ဟာကမ္ဘာ့စက်ဘီးစီးခြင်းကွန်ယက်ကိုမ ၀ င်ရသေးဘူးဆိုရင်၊ တစ်နေရာရာမှာရှိနေတဲ့ကမ္ဘာလုံးကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ သင်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်။
သင်ပြီးပါကနောက်ဆောင်းပါးကိုသင်ကြည့်ရှုလိုပေမည်၊ ၎င်းမှာမိုးလုံလေလုံလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုတွင် FTP စစ်ဆေးမှုကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ဒါမှမဟုတ်အပြင်ကညစ်ပတ်စက်ဘီးကိုဘယ်လိုသန့်ရှင်းရမယ်ဆိုတာပြင်ပမှာရှိရင်အထူးအသုံးဝင်တဲ့နောက်ဆောင်းပါးတစ်ခုအတွက်။
လန်းအမ်းစထရောင်းရဲ့ FTP ကဘာလဲ။
လန်းအမ်းစထရောင်းသူကမိနစ် ၃၀ မှ ၄၀ အတွင်းမှာပျမ်းမျှ ၄၉၅ ဝပ်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။07.08.2020
Usain Bolt ၏အမြန်နှုန်းကဘာလဲ။
စံချိန်တင်အနိုင်ရဖြစ်ရပ်မှာUsain Bolt ၏ပျမ်းမျှမြေပြင်မြန်နှုန်းတစ် ဦး သို့ရောက်ရှိစဉ် 37.58km / တစ်နာရီဖြစ်ခဲ့သည်အမြန်နှုန်းကမ္ဘာ့အရန်သင့်လျှော်သော ၆၀-၈၀ မီတာအကွာအဝေးတွင် ၄၄.၇၂ ကီလိုမီတာ / နာရီဖြစ်သည်အမြန်ဆုံးလူ ဂျမေကာ SprinterUsain Boltအဖြစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်အမြန်ဆုံးကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ကလူ။
သင်မှန်လျှင်နင်မင်းသွားနိုင်ပါတယ်အဖြစ်အစာရှောင်သင်တတ်နိုင်သလောက်နင်းက။ သို့သော်အများဆုံးစက်ဘီးနေစဉ်လျှပ်စစ်အထောက်အပံ့ပေးကိုရပ်တန့်နင်တစ်နာရီမိုင် ၂၀ နှုန်း (အတန်းအစား ၁ နှင့်အဆင့် ၂ ebikes) ။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအချို့စက်ဘီးတစ်နာရီလျှင် (၂၈) မိုင်အထိအမြန်နှုန်းဖြင့်သွားနိုင်သည့်အထောက်အပံ့ကိုပေးလိမ့်မည်။
တစ်နာရီ ၂၀ မိုင်နှုန်းသည်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးပေါ်တွင်လား
ပျမ်းမျှအမြန်နှုန်း - လက္ခဏာများ
စက်ဘီးစီးသူအများစုသည် ၁၀-၁၂ ကိုအောင်မြင်နိုင်သည်တစ်နာရီမိုင်ပျမ်းမျှအလွန်လျင်မြန်စွာလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအတွေ့အကြုံ၊ အလယ်အလတ် (မိုင် ၄၀): ပျမ်းမျှ ၁၆-၁၉ ခန့်ရှိသည်တစ်နာရီမိုင်။ အရည်အချင်းပြည့်ဝသည့်ကလပ်မြင်းစီးသူရဲ၊ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ အလယ်အလတ်အဝေးမှ (၅၀-၆၀ မိုင်)နှစ်ဆယ်-24တစ်နာရီမိုင်။
ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဟုတ်ပါသည်စျေးကြီးတဲ့စက်ဘီးသွားမြန်မြန်။ ဒီထက်နည်းတဲ့အတွက်စက်ဘီးသူတို့၏မြင်းစီးသူရဲကြောင့်ဖြစ်သည်။ စီးနင်းသူစျေးကြီးတဲ့စက်ဘီး(ပျမ်းမျှအားဖြင့်တဖန်)နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲ၊ စနစ်တကျလေ့ကျင့်ပါ၊ သူတို့ဟာမတော်တဆမြင်းစီးသူရဲတွေထက်ပိုကောင်းတဲ့မော်တာတွေထဲကိုရောက်သွားတယ်။
တစ်ကီလိုလျှင် ၂.၅ ဝပ်ရှိသလား။
သင်၏ FTP အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ သင်ပြိုင်ရန်သူတို့အကြံပြုသည့်အမျိုးအစားများကိုဖော်ပြပါကီလိုဂရမ်နှုန်း watts က။ Zwift C အမျိုးအစား (အောက်ခြေမှလာသည်) ကသင့်အကြားအဆင့်တွင်စီးနင်းနိုင်ရမည်ဟုဆိုထားသည်၂.၅၃.၁ မှ w / သို့ကီလိုဂရမ်။ အကယ်၍ A အမျိုးအစားတွင်အောင်မြင်လိုပါက ၄.၀ w / w ထိသင်လိုအပ်လိမ့်မည်။ကီလိုဂရမ်သို့မဟုတ်ပိုကောင်း။
တစ်မိုင်လျှင်ပျမ်းမျှအားဖြင့် Bradley Wiggins သည်ဘယ်လောက်ဝပ်သနည်း။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ၅၂.၅၂၆ ကီလိုမီတာ (၃၃.၈၈၁ မိုင်) ကိုခြေလျင်သွားသောဗြိတိသျှစက်ဘီးစီးသူဘရက်ဒလီဝီဂင်သည် ၄၄၀ ဝပ်အားဖြင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ခန့်မှန်းထားသည်။ spin အတန်းအတွင်း၌သင်၏နံပါတ်များကိုသင်အာရုံစိုက်မိပါကထိုကိန်းဂဏန်းများသည်သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေမည်မှာသေချာသည်။
စည်းမျဉ်းများအပြောင်းအလဲအပြီးတွင်ဂျာမနီ Jens Voigt သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ Grenchen ရှိ Velodrome Suisse တွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။ သူသည်စံချိန်သစ် ၅၁.၁၁၀ ကီလိုမီတာ (၃၁.၇၅၈ မိုင်) ကိုစံချိန်တင်ထားခဲ့ပြီး Sosenka က ၁.၄၁ ကီလိုမီတာ (၀.၈၈ မိုင်) ဖြင့်စံချိန်တင်ထားသည်။
နာရီကိုစက်ဘီးစီးခြင်း၏အမြင့်ဆုံးစံချိန်ဟုကျယ်ပြန့်စွာယူဆကြသော်လည်းပုံမှန်အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောအကွာအဝေးကိုဖြတ်ကျော်ရန်လိုအပ်မည့်အစား၊ ဤဖြစ်ရပ်သည်စက်ဘီးစီးသူများအား velodrome ပတ်ပတ်လည်တွင်သွားနိုင်သမျှများသောခြေနင်းကိုမိနစ် ၆၀ သတ်မှတ်ရန်သတ်မှတ်ထားသည်။
Chris froome ခရီးစဉ်ပြင်သစ်
ခရစ်ခရီးစဉ်ပြင်သစ် froome - ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရန်
၂၀၂၁ ခုနှစ် Tour de France တွင် Chris Froome ရှိပါသလား။ Froome သည် ၂၀၂၁ ရာသီမတိုင်မီငါးနှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးယခုတွင်အသက် ၃၆ နှစ်ရှိသေးသော်လည်းအဒမ်သည်နောက်ထပ် Grand Tour ပြိုင်ဘက်ဈေးကွက်သို့ပြန်လာလိမ့်မည်ဟုမယုံကြည်ပါ။ 2021 ။
က de ပြင်သစ်ကြွင်းသောအရာရက်ပေါင်းလှည့်လည်
Tour de france နားရက်များ - ပြီးပြည့်စုံသောလက်စွဲစာအုပ်
Tour de France တွင်အနားယူရန်ရက်ပေါင်းမည်မျှရှိသနည်း ၂၀၂၁ Tour de France သည် ၂၃ ရက်ကြာသည်။ တစ်ရက်တွင်တစ်ကြိမ်နှင့်နှစ်ရက်နားကြပ်တစ်ရက်ရှိလိမ့်မည်
က de ပြင်သစ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလှည့်
Tour de France စည်းမျဉ်းများ - အလားအလာရှိသောဖြေရှင်းနည်းများ
Tour de France ပြိုင်ပွဲကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။ Tour de France အသင်းသည်အားကစားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းစက်ဘီးစီးသူ ၁၉၈ ဦး ရှိပြီးအသင်း ၉ သင်းမှ ၂၂ သင်းဖြစ်သည်။ ၂၁ ရက်တာကာလ၊ များသောအားဖြင့်ဇူလိုင်လတွင်စက်ဘီးစီးသူများသည်ကီလိုမီတာ ၃၅၀၀ ရှည်သောပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပကြသည်။ စင်မြင့်ကိုတစ်နေ့တာဖျော်ဖြေသည်၊ အကြမ်းအားဖြင့် ၂၂၂ ကီလိုမီတာခန့်ရှိပြီး ၅ နာရီခွဲခန့်ကြာသည်။
cavendish 2019 ခရီးစဉ်က de ပြင်သစ်အမှတ်အသား
မာကု cavendish 2019 ခရီးစဉ်က de ပြင်သစ် - ပြည့်စုံရည်ညွှန်းသည်
အဘယ်ကြောင့်မာကု Cavendish က Tour ဒီပြင်သစ်၌ဤနှစ်တွင်ဒီနှစ်မဟုတ်ပါဘူး? ကျန်းမာရေးပြ,နာများ၊ စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျခြင်းနှင့်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားကန်ထရိုက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင်အခက်အခဲများကြောင့် Cavendish အတွက်နှစ်နှစ်တာ ၀ န်မရှိပါ။ သူ၏အသင်းဖော်နှင့် Sprinter ဆမ်ဘန်နက်ကိုတန်းစီဇယားမှဖယ်ရှားပြီးနောက်ဗြိတိသျှ Sprinter သည်အံ့အားသင့်ဖွယ်ခေါ်ဆိုမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ 2021 ။
ပြင်သစ် 2017 လေယာဉ်ပျက်ကျမှု
Tour de france 2017 crash - ပုံမှန်အဖြေများနှင့်မေးခွန်းများ
Tour de France မှာမြင်းစီးသူရဲများသေသလား။ လွန်ခဲ့သောအနှစ်နှစ်ဆယ်က Fabio Casartelli သည် Cat ကိုဆင်းနေစဉ်ကွန်ကရစ်အတားအဆီးတစ်ခုသို့ပျက်ကျခဲ့သည်။ ၁ Col de Portet-d'Aspet သည် ၁၉၉၅ ဇူလိုင် ၁၈ ရက်နေ့တွင် Tour de France ၏အဆင့် ၁၅ တွင်ဇူလိုင် ၁၈ ရက်နေ့တွင် Tour သမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံးသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုတွင်အကြီးအကျယ် ဦး ခေါင်းဒဏ်ရာကြောင့်သေဆုံးခဲ့သည်။ အသက် ၂၄ နှစ်ရှိပါပြီ။
de de france အချိန်ဇယား 2015
Tour de france အချိန်ဇယား ၂၀၁၅ - လုပ်ဆောင်မှုကို ဦး တည်သည့်ဖြေရှင်းနည်းများ
၂၀၁၅ Tour de France ကိုဘယ်သူဘယ်သူနိုင်ခဲ့သလဲ။ ၂၀၁၅ /